काठमाडौं । गत साता गौशाला स्थित पशुपति भिजन अगाडी भएको गोली काण्ड प्रकरणमा नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । कांग्रेस नेता तथा पुराना गुण्डा नाइके गणेश लामालाई लक्षित गरी गोली प्रहार भएको थियो । तर, सिसी ...
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले स्वरूप परिवर्तन गरी सवारी चलाउने १ सय १० मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिएको छ ।महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट खटिएको टोलीले स्वरुप परिवर्तन गर्ने र ठूलो आवाज बनाएर गुडा ...
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीमण्डलमा भारतीय प्रभाव स्थापित गर्न विवादास्पद व्यापारी उपेन्द्र महतोले निकै चलखेल गरेका छन् । राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर जिताएको वाम गठबन्धन भारतीय फोल्डमा गइरहेको ...
काठमाडौं । प्रहरीको फरार सुचीमा रहेका फरार सूचीमा रहेका प्रदेश नम्बर ४ का प्रदेश सभा सदस्य दिपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङ भारतमा लुकेर बसेको खुलेको छ। मनाङेको सांसद बन्ने सपना पनि अब सकिएको छ । मना ...
बनेपा । नेपाली कांग्रेस काभ्रेले गणेश लामाको रिहाइको माग गर्दै बनेपामा ठुलो प्रदर्शन गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीले हतियार राखेको अभियोगमा तीन दिन अगाडि पुराना गुण्डा नाइके लामालाई पक्राउ गरेक ...
इन्काउण्टरबाट जोगिएका गणेश लामाले पोले दुई प्रहरीको नाम, प्रहरीको योजना असफल !
काठमाडौँ । फिल्मी शैलीमा पेस्तोल र ६ राउण्ड गोलीसहित पक्राउ गरिएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पुराना गुण्डा नाइके गणेश लामालाई प्रहरीले १० दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीले बिहीबार ...
ओलीका कारण यसरी गुम्दैछ जनार्दनको मन्त्री पद, गुटकाे भेला गर्दै रक्षाा मन्त्री
काठमाडौं । पावरफुल मन्त्रालय ताकेका जनार्दन शर्माले यस पटक मन्त्री पद नपाउने निश्चित सरह भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शर्मालाई राम्रो मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल द ...
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराजले तोके इजलास, पराजुली भन्छन् : प्रधानन्यायाधीश मै हुँ, काम नियमित गर्छु
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई साउनमै अवकास पाएको पत्र थम ...
रुसमा रहेका त्रिविका पूर्व उपकुलपति शर्माको निधन
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति एवम् त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. गोविन्द शर्माको निधन भएको छ। वरिष्ठ शल्यचिकित्सक समेत रहेका शर्माको ७५ वर्षको उमेरमा गएराती रुसमा निध ...
राष्ट्रपतिको सपथ बैध कि अवैध ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त भइसकेका प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिएपछि त्यसालाई वैधानिकता मान्ने वा नमान्ने भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारील ...
काठमाडौं । विश्वका चर्चित बैज्ञानिक स्टीफन हकिङ्गको निधन भएको छ । उनको ७६ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । भौतिकशास्त्रका विद्वान सिद्धान्तकार एवं प्रचलित ‘अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम’ पुस्तकका ब ...
अन्यौलकाबीच राष्ट्रपतिको शपथ ४ बजे
काठमाडौं । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथ ग्रहण आज अपरान्ह ४ बजे हुँदैछ । उनले दोस्रो कार्यकालका लागि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदै छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चारविज्ञ माधव शर्माले ...
राष्ट्रपति भण्डारी धर्म संकटमा
काठमाडौं । विद्यादेवी भण्डारी पुनः राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन्। आज भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा भण्डारीले ३९ हजार २ सय ७५ मतभार प्राप्त गरिन् भने भण्डारीकी प्रतिस्पर्धी कुमारीलक्ष्मी राईले ११ हजार ७ ...
चौधरीलाई गोली हानेको आशंकामा विप्लवका ३ कार्यकर्ता पक्राउ
काठमाडौं । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका मेयर ममताप्रसाद चौधरीलाई गोली हानेको आशंकामा प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीका तीन जना कर्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ। सोमब ...
काठमाडौं । राष्ट्रपति चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदैछ ।राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेकी विद्यादेवी भण्डारी र कांग्रेसकी कुमारी लक्ष्मी राई उम्मेदवार छन् । वाम गठबन्धनसहित अन्य साना दलको पनि समर्थन पाएकाले ...
एमबीबीएस पढ्न गएका १२ सहित २२ नेपालीको मृत्यु, दुर्इ विद्यार्थी बाँच्न सफल
काठमाडौं । आज दिउसो भएको युएस बंगलाको जहाज दुर्घटनामा परी २२ नेपालीको मृत्यु भएको छ। जसमध्ये १५ जना बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थी परेको बताइएको छ । जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित ७१ यात् ...
काठमाडौं । यूएस बंगला एयरलाइन्सको विमान त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना हुँदा ४९ जनाको मृत्यु भएको छ । विमानमा रहेका २१ जना घाइते भएका छन् । एकजनाको अवस्था अज्ञात छ । वि ...
राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा तिमिल्सिना निर्विरोध
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्षमा एमाले सांसद तिमिल्सिनाको मात्र उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध भएका हुन् । यद्यपि अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाच ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यूएस बङ्लाको विमानमा आगलागि
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणको क्रममा यूएस बङ्लाको विमान रनवेबाट बाहिर गएर दुर्घटनामा परेको छ । ढाकाबाट आएको ड्यास–८ विमान दिउँसो २ बजेर २० मिनेट जाँदा अवतरणको क्रममा रनवे ...
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको मनोनयन आज, तीन जनाले भोट हाल्न नपाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि आज मनोनयन दर्ता हुँदै छ । मनोनयन दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्मको समय तोकिएको छ। दिउँसो साढे १ बजे उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गर्ने संघीय संस ...
जनताको सेवक हुँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत माग्दै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने बाचा गरेका छन् । संसदको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वास गर्नु पर्ने कुन ...
राजधानीलगायत देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा
काठमाडौं । स्थानीय वायुको प्रभावका कारण राजधानीलगायत देशका विभन्न स्थानमा वर्षा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा आसपासका क्षेत्रदेखि पूर्वी पहाडी भू–भागहरुमा मौसम बदली भएर मेघ गर्जनसहित वर्षा ...
बोक्सीको आरोमा ६ घण्टासम्म कुटपिट गर्ने भोलेबाबा यौन पिपासु भएको खुल्यो, मेयर र प्रहरीमाथि पनि कारबाही (भिडियोसहति)
कैलाली । कैलालीको घोडाघाडी नगरपालिका–५ देउकलीमा विहीबार राधा चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिट गर्ने आफूलाई भोलेबाबा बताउने रामबहादुर चौधरीले युवतीहरुमाथि यौन शोषण गर्दै आएको रहस्य खुलेको छ । २३ व ...
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक बिदामा कटौती गर्ने भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेको विश्लेषण गर्दै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदामा कटौती गर्न प्रस्ताव गरेको हो। हाल दिइँदै आएको बिदामा २१ दिन क ...
४६ प्रतिशत डाक्टर फेल
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परिक्षामा एको ४६ प्रतिशत चिकित्सक फेल भएका छन् । परिक्षामा सहभागी बिभिन्न ३९ बिधाका ३ सय १८ जना चिकित्सक मध्ये शनिबार राति प्रकाशित नतिजा अनुसार १ सय ७३ जना मात ...
देब्रे र दाहिने छुट्याउन नसक्ने नर्भिकका डाक्टर निलम्बित
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले देब्रेको सट्टा दाहिने घुँडाको शल्यक्रिया गर्ने नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलका दुइजना चिकित्सकलाई निलम्बन गरेको छ । नर्भिक अस्पताल थापाथलिमा कार्यरत डा. प्रवीण नेपाल र ड ...
राष्ट्रिय सभामा मनोनित तीन सदस्यले भोट हाल्न नपाउने
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभाको स सदस्यमा मनोनित गरेका तीन सदस्यहरुले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । उनीहरुले आज पद तथा गोपनियताको सपथ लिए पनि निर् ...
देब्रे र दाहिने छुट्याउन नै नसक्ने चिकित्सकले कस्तो सेवा देलान् ? : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर भएर सेवा दिन चिकित्सकलाई आग्रह गरेका छन् । नेपालको सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालमा सर्जिकल भवनको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ...
काठमाडौं । शीतल निवासबाट एमालेभित्र गुटको राजनीति चलाउँदै आएकी विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपतिमा पुनः मनोनयनसँगै विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको जो ...
काठमाडौं । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ गतिविधिबाट भारत चिन्तित हुन थालेको छ । चिनियाँ गतिविधि रोक्न असफल भएको भन्दै नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरी र भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’का ...
युरोप पठाउने नाममा ठगि गर्ने कन्सलटेन्सीको गिरोह धमाधम पक्राउ
काठमाडौं । महानगरिय अपराध महाशाखाले युरोप पठाउने भन्दै ठगी गर्ने एजुकेशन कन्सलटेन्सीका संचालकलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । सुनौलो प्रकाश कन्सल्टेन्सीका संचालक आर्यन लामाले स्पेन र पोर्चुगलमा ...
अवैध लागूऔषधसहित भारतीय नागरिक प्रहरी फन्दामा
काठमाडौं । महानगरिय प्रहरी प्रभाग नागढुङ्गाले अवैध लागूऔषध सहित भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले रौतहटबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बा३ख ४४६३ नम्बरको यात्रुवाहक बस चेक जाँचको क्रममा शिवहर विहार व ...
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री अब्बासी स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । दुई दिने नेपाल भ्रमण पूरा गरेर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहीद खकान अब्बासी स्वदेश फर्किएका छन् । हिजो नेपाल आएका प्रधानमन्त्री अब्बासीले स्वदेश फर्कनु अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग श ...
एजुकेशन पार्कको आयोजनामा ‘स्टडी इन अष्ट्रेलिया शैक्षिक मेला २०७४’ हुँदै
काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरी एजुकेशन पार्कले ‘स्टडी इन अष्ट्रेलिया शैक्षिक मेला २०७४’ आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी शुक्रबार अर्थात ...
सैनिक मञ्चमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री अब्बासीलाई गार्ड अफ अनर
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहीद अब्बासी सैनिक मञ्च टुडिखेलबाट गार्ड अफ अनरको सम्मान पाउने पहिलो विदेशी बनेका छन् । नेपाल सरकारले आज साँझ सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिएक ...
काठमाडौं । अबैध रुपमा बिदेश पठाएर ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सिका संचालक पक्राउ परेका छन्। पुतलीसडक स्थित क्याचे एजुकेशन एन्ड ट्रेनिङ कन्सलटेन्सीका संचालक पुरुषोत्तम खड्कालाई विभिन्न व्यक्तिहरुलाई प्र ...
राष्ट्रपतिसमक्ष ठाकुर र भट्टले लिए शपथ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ज्येष्ठ सदस्यद्वयले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभाका ...
नवराज सिलवालले सपथ लिएपछि कीर्ते मुद्दा के हुन्छ ?
काठमाडौ। किर्ते कागजमा छानबिनका लागि प्रहरीबाट खोजी भइरहेका एमाले सांसद नवराज सिलवाल शनिबार संसद् प्रवेश गरे। सिलवाल संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको एमाले–माओवादी संसदीय दलको संयुक्त बैठक ...
दरबन्दी थपेर पनि बढुवा नगर्ने आईजीपीको यो कस्तो शैली ?
काठमाडौं । साउनदेखि प्रहरीमा १२ जना डीआईजीको दरबन्दी रिक्त रहँदारहँदै एसएसपी कृष्णप्रसाद गौतम उमेरहदले फागुन २३ गते अवकाश पाउँदै छन्। आईजीपी प्रकाश अर्याल संगठनका रिक्त दरबन्दीमा बढुवाको सिफारिस नगर् ...
काठमाडौं । बिहीबार देशका पहाडी जिल्लाहरुमा होली पर्व मनाइए पनि तराई र मधेस क्षेत्रमा भने आज धुमधामका साथ फागु पूर्णिमा अर्थात् होली मनाइँदैछ । काठमाडौंमा बसोबास गर्ने तराई क्षेत्रका बासिन्दाले पनि आपस ...
चाकडीको नीति अबलम्बन गर्दै भारतीय राजदुत, ओलीसँग दुई सातामा चार पटक भेटवार्ता
काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतीय राजदुत मञ्जिव सिंह पुरीले विभिन्न बहानामा ओलीसँग चार पटकसम्म भेटवार्ता गरेका छन् । दुई साताको अबधिमा मात्र रहेका ति भेटवार्ताहरु अर्थहिन र ...
होलीमा प्रहरीको कडा चेकिङ, ५ सय २३ मोटरसाइकल नियन्त्रणमा
काठमाडौं । होलीमा काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले एक सय ६७ जना पक्राउ गरेको जनाएको छ । होलीमा जबरजस्ती रङ्ग दल्न खोज्ने र आवञ्छित कार्य गर्नेलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।काठ ...
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल कार्यालयले फागुन २२ गतेदेखि मलेसियाको निजी एयरलाइन्स एयर एसियाको उडान बन्द गराउने भएको छ। एयर एसियाले विमानस्थल सेवा शुल्क बापतको बक्यौता नतिरेपछि उ ...
काठमाडौं । संघीय संसदको पहिलो बैठकका एजेण्डाबारे छलफल गर्न संसद सचिवालयले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । संसद सचिवालयले बुधबार दिउँसो २ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँबानेश्वरमा बैठक आह्वान ग ...
हेटौंडा । सबैभन्दा पहिले मुख्य मन्त्री पाएको प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषद् आज विस्तार हुने भएको छ । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आज मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने भएका हुन् । एमालेबाट तीन र माओवा ...
एमालेमा मन्त्री बन्नेहरुको वाढी, अर्को मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चार मन्त्री नियुक्त गर्दै दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपनि अर्को बिस्तार कहिले गर्ने हुन अन्योल नै छ  । एमाले र माओवादी केन्द्रबाट १५ मन्त्रील ...
ओलीले गरे मन्त्रिमण्डल विस्तार: पोखरेल, खतिवडा, थापा र यादवले लिए सपथ
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादीका दुई र एमालेका दुई गरी चार जनालाई समावेश गरेर दोस्रो पटक मन्त्रिमण्डल गरेका छन् । ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल सात सदस्यीय भएको छ । एमालेका ईश्वर ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै आदेशका कारण बढी अवधि थुनामा बिताउन बाध्य व्यक्तिलाई दैनिक रु ३०० का दरले क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश के ...
काठमाडौँ । आफुलाई सबैभन्दा ठुलो सुबिधा सम्पन अस्पताल दाबी गर्ने नर्भिक अस्पताल ठुलो समस्यामा पर्ने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नर्भिक अस्पतालमा डाक्टरले गरेको लापरवाहीको विषयमा अनुसन्धान गरी कार ...